Mahdi Abu-Yaasiin, Somali-Russian-kii Daacish oo ku dhex geeriyooday xabsiga dhexe ee Xamar – Hornafrik Media Network
Sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Daacish ee Soomaaliya oo Muqdisho ku qaadanayey 15 sano oo xabsi ah, ayaa xalay xabsiga dhexe ee Xamar ku dhex geeriyooday, sida ay sheegeyso xog aan helnay.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa noo sheegay in ninkas oo lagu magacaabi jiray Mahdi Maxamuud Cabdi (Abuu Yaasiin) uu geeriyooday kadib markii uu xalay xanuun deg deg ah ku soo booday, mana jirto cid ilaa hadda faah-faahin ka bixisay xanuunka la sheegay inuu u geeriyooday ruuxaas.
Mahdi oo ahaa muwaadin Soomaali ah ayaa sidoo kale heystey dhalashada dalka Ruushka, waxaana 2-dii bishi August ee sanadki 2018-kii lagu helay ka mid ahaanshaha ururka Daacish ee ka dagaalama qeybo ka mid ah Soomaaliya.
Sidoo kale Mahdi xilligaas waxuu maxkamadda ka hor qirtay inuu Baycadiisa siiyey hoggoomiyihii la dilay ee Daacish Abu Bakar Al-Bagdadi, isagoo ka soo qaaday balan aheyd inuu Soomaaliya ka aas-aaso garab xoog leh oo ka tirsan Daacish.
Mahdi Abuu Yaasiin
Mahdi ayaa naaneys ahaan ula baxay magaca Abu Yaasiin, waxuuna sheegay in Yaasiin la yiraahdo wiil ay u dhashay haweyney Russian ah oo u dhaxday, taas oo lagu magacaabo Church Nia.
Abu Yaasiin ayaa qeyb ka mid ah noloshiisa ku soo qaatay dalka Syria, oo uu kala soo barbar dagaalamay ururka Daacish.
Mahdi Abu Yaasiin ayaa xilligii la qabtay ku mashquulsanaa aas-aasidda garab Daacish ah, oo ka howl-geli lahaa koonfurta dalka Soomaaliya, waxaana markii uu yimid Soomaaliya khilaaf xoog leh uu soo kala dhex galay isaga iyo ninka hoggaamiya Daacish-ta Soomaaliya ee lagu magacaabo Cabdulqaadir Muumin.
Xaaf oo qoraal xasaasi ah oo ka dhan ah DF u direy Beesha Caalamka